IMozilla ikhupha iFirefox yeAmazon Fire TV kunye neMlilo TV Stick | Iindaba zeGajethi
IMozilla isungula iFirefox yeAmazon Fire TV kunye neMlilo TV Stick
URuben inyongo | | Abadlali
IMozilla isebenze nzima mva nje ukufumana isikhundla esivelileyo kwishishini le-Intanethi. Ukuba kutshanje ubukho be Firefox Quantum kuwo onke amaqonga anokwenzeka, njengenye yeenketho ezichithe izixhobo ezincinci. Nangona kunjalo, Ngamaqela amaninzi umkhangeli weempungutye othandwayo afumanekayo, ngcono. Oku kuyakube kucinga ngeMozilla kunye nokubuyela umva ngenye indlela engaphaya yabadlali beendaba beAmazon, iAmazon Fire TV kunye I-Amazon Fire TV Stick.
Kwakhona, olu khetho luza ngexesha elilunge kakhulu. Ngoba? Kuba UGoogle kunye neAmazon bayaphikisana kwaye eyangaphambili isusile usetyenziso lwayo lweYouTube kwivenkile yeapp, yenye yeenkonzo ezisasazwayo ezisasazwayo kwihlabathi. Nangona kunjalo, ngofakelo lweFirefox kubo bobabini abadlali beAmazon, umsebenzisi wokugqibela-oyena mntu uchaphazeleke kwezi ngxabano- uya kuba nakho ukubhenela ekulayisheni iphepha lewebhu lenkonzo yevidiyo.
Ewe kunjalo, uncedo lokusebenzisa usetyenziso olunikezelweyo alufani, kodwa ubuncinci umsebenzisi weAmazon Fire TV uya kuqhubeka nokukwazi ukusebenzisa umxholo eqongeni likaGoogle. Okwangoku, kufanelekile ukutsho usetyenziso lweFirefox luya kufumaneka, okomzuzwana, kuphela eUnited States.
Njengoko usazi kakuhle, ufakelo lulula kwaye ungasebenzisa iindlela ezimbini. Eyokuqala kukwenza ukusuka kwisixhobo uqobo. Kuyo unokukhangela igama elithi "Firefox" kwibhokisi yencoko yababini ephezulu ngasekhohlo okanye uyenze ngemiyalelo yelizwi.
Ngoku, ukuba uyafuna, ungayenza kwakhona kwikhompyuter, kwiselfowuni, njl. ukusuka kwiphepha leAmazon. Kwicandelo leMidlalo kunye nokusetyenziswa kweAmazon Fire TV khangela umkhangeli. Nje ukuba uyifumane, kwimenyu esekunene kufuneka ukhethe u "Thumela ku" kwaye ukhethe iTV yoMlilo ebonakalayo. Emva koko kufuneka ulinde ukufakwa kwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Abadlali » IMozilla isungula iFirefox yeAmazon Fire TV kunye neMlilo TV Stick
Eyona nto iphambili phakathi kuluhlu lwee-smartphones
U-Eric Schmidt uyehla njenge-CEO kwiAlfabhethi (Google)